Roblox wuxuu ku hafiyay horumariyayaal guddiyo aflagaado ah. Wararka IPhone
Wax badan ayaa laga sheegay ku -habboonaanta ama ku -xadgudubka qoondada ku dhawaad ​​30% wadarta qaansheegta ee Apple quseyso macaamillada lagu sameeyay iOS iyo App Store. Khidmad, dhanka kale, ah heerka warshadaha.
Guddiyada uu Roblox ku eedeeyo soo -saareyaasha bixiya alaabtooda dhijitaalka ah ayaa si cad uga sarreeya kan shirkadaha kale. Su'aashu hadda waxay tahay, maxay ka fikirayaan ragga ku jira Ciyaaraha Epic? Wax walba waxay muujinayaan in hal-abuurayaasha Fortnite iyo horyaalyaasha suuqa xorta ah ee dhijitaalka ah aysan ku fadeexayn doonin arrintan.
Baaritaan dhowaan la sameeyay Dadku Waxay Sameeyaan Ciyaaraha bishii Ogosto 19 -keedii taasna waxaa lagu daabacay kanaalkiisa YouTube -ka oo ku dhex jira arrintan. Sida in badan oo idinka mid ahi og yihiin, Roblox wuxuu leeyahay lacag u gaar ah oo la yidhaa Robux, tanina waxay qayb ka tahay dhibaatada. Marka loo eego xisaabinta, ku -macaamilka Roblox, 26% waxay ku sii jiri doontaa komishan, 9% maalgashiyada madal iyo 14% kale oo loogu talagalay martigelinta iyo taageerada. Tan waxaan ku daraynaa in lacagta dalwaddu ee Roblox ay hoos imaaneyso guddiyada App Store ama Google Play Store. Natiijadu waxay tahay in 27% oo keliya wadarta kharashka hawlgalka ee macmiilku qaatay uu aakhirka gaari doono soo -saaraha.
Sidaad u malayn karto, tirada ugu badan ee hal -abuurayaashan ku dhex jira Roblox waxay u badan yihiin shaqsiyaad, kana fog shirkado waaweyn oo kaliya oo doonaya inay naaxiyaan boqortooyadooda, sida ka dhacday maalintiisii ​​u dhexeysay Ciyaaraha Epic iyo Apple sababtuna tahay dood ku saabsan Fortnite. Soo -saareyaasha qaarkood waxay tilmaamaan inay kasbadeen ku dhawaad ​​$ 350 macaash iyagoo helay iibsi qiimahoodu yahay $ 1.000, wax adag in la maleeyo, laakiin ma jiro ikhtiyaar kale oo iyaga u yaal.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Roblox ayaa ku ceejiya horumariyayaal guddiyo aflagaado ah
Podcast 13x01: Waxaan ku soo laabannaa Falanqaynta Xagaaga kulul